VAKY TRANO SESILANY : Nitokona teny amin’ny tobin’ny Zandary ireo mponina
Mitombo isa hatrany ny fitarainana momba ny vaky trano voarain’ireo mpitandro filaminana ao amin’ny Distrikan’i Tanambao Manampotsy, efa ho iray volana izay. 10 août 2017
Lasibatr’ireo jiolahy amin’izany ny tranom-barotra sy ireo tokantrano sasany noho ny hala-botry.
Velon-taraina ireo mponina niharan’ny halatra sy fanafihana amin’izao fotoana izao, ka nitokona teny amin’ny biraon’ny Zandary daholo izy ireo ary mitaky ny fitadiavam-bahaolana haingana. Mbola tsy nisy tratra ireo mpangalatra naha-vanona izany. Ahian’ny mpiray vodirindrina ho misy andian’olona miray tsikombakomba amin’izany. Misy kosa anefa ireo olona sasany ny mandiso izany ka milaza fa mety ho olona avy any ivelan’ny faritra mihitsy no manatanteraka asa raty eo an-tanàna.
Ny mahatalanjona ny iray tanàna dia matetika amin’ny fotoana tsy ampoizina toy ny amin’ny andro antoandro be iny no misy mamaky ny trano ka rehefa foana tanteraka izany vao mahatsikaritra ny rehetra.
Misy aza amin’ny andro alina no vaky ny trano fivarotana enta-madinika, fa tsy misy maheno ireo tompon-trano. Manoloana izay fitokonana izay dia tapaka àry fa hotontosaina anio ny famoriana ireo ben’ny tanàna sy Sefo Fokontany ary ny mpitandro filaminana rehetra sy ireo vatan-dehilahy, ka hodinihina amin’izany ny paik’ady hamongorana ireo asa ratsy sy ny fisamborana ireo olon-dratsy.
Hatreto mantsy dia mbola tsy fantatra mazava ireo jiolahy mpihaodihaody ao an-tanàna. Andrasana araka izany ny tohin’ny toe-draharaha.